पोखरा थिएटरमा आजदेखी ‘सिरुमारानी’ – Todaypokhara
पोखराको ग्रैह्रापाटनस्थित नाटकघर ‘पोखरा थियटर‘मा आजदेखी ‘सिरुमारानी’ नाटक मञ्चन हुँदैछ । यो नाटक मञ्चनसँगै थियटर हलमा बसेर नाटक हेर्ने पोखरेलीको वर्षाेदेखिको सपना पुरा हुँदैछ । थिएटरको उद्घाटनसँगै नाटक मञ्चन हुनेछ ।
थियटरको उद्घाटन कास्की क्षेत्र नं. २ का सांसद रविन्द्र अधिकारीले गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियटरका अध्यक्ष परिवर्तनले जानकारी दिए । ‘सिरुमारानी’ फागुन २ गतेदेखी फागुन १५ गतेसम्म हरेक नियमित मञ्चन हुनेछ ।
नाटक हरेक साँझ पौने पाँच बजे मञ्चन हुनेछ । शनिबार र विदाको दिन दिउँसो १ बजेबाट अतिरिक्त सो समेत हुनेछ । नाटक हेर्न तीन सय र पाँच सय दरको टिकट काट्नुपर्नेछ । विद्यार्थीलाई भने एक सय दरको टिकट लाग्नेछ ।
नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्तले लेखेको नाटक ‘सिरुमारानी’मा पोखराका नयाँ तथा पुराना रंगकर्मीको अभिनय देख्न पाइनेछ । नाटकमा पोखरेली रंगमञ्चमा चिनिसकेका प्रकाश घिमिरे, माओत्से गुरुङ, विष्णु गौतम, धनबहादुर गायकको अभिनय धेरै लामो समयपछि देख्ने पौका पोखरेलीले पाएका छन् ।
यसअघि रंगमञ्चमा देखिसकेका दिल गुरुङ र रमेशबाबु तिमिल्सिना तथा रंगमञ्चमा आशा लाग्दो प्रतिभा बनेर उदाउन खोजेका अन्जु दाहाल, लक्ष्मण डुम्रे, बबिता मल्ल, प्रसूना भण्डारी, सीमा गुरुङ, सचिन गिरी, शरद भण्डारी, ध्रुव पौडेल, अविराज बी. सी., सूर्य सुवेदी, सम्झना सिर्पाली, विश्वराज पौडेल लगायतका कलाकारको अभिनय नाटकमा देख्न पाइनेछ ।
थियटरका अध्यक्ष परिवर्तनको संयोजनमा मञ्चन हुने नाटकको निर्देशन सोमनाथ खनालले गर्दैछन् । पोखरा थियटरको पहिलो ब्याचका नवप्रवेशी कलाकारहरुलाई मण्डला थियटरका व्रिmयटिभ डाइरेक्टर राजन खतिवडा, मण्डलाका अध्यक्ष तथा कलाकार दयाहाङ राई, कलाकार बुद्धि तामाङ, सोमनाथ खनाल, सुदाम सी. के., विकास जोशी, खगेन्द्र लामिछाने, मनोज पण्डित, श्याम खड्का, सरुभक्त, प्रकट पगेनी ‘शिव’, तीर्थ श्रेष्ठ, प्रकाश घिमिरे, धनबहादुर गायक, प्रमिला तुलाचन, रमेश श्रेष्ठ, विष्णु नेपाली, मनोज गुरुङ, गनेस पौडेल, रुपिन्द्र प्रभावीलगायतले अभिनयका विभिन्न शैलीबारे सहजीकरण गरेका थिए ।